ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အကြောင်းရင်းကို မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးကူညီမည်ကို ယူကရိန်း ငြိမ်းချမ်းရေး သမား Yurii Sheliazhenko - ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု
ယူကရိန်း ပါစီစစ်ဝါဒီ Yurii Sheliazhenko သည် ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အကြောင်းရင်းကို မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးကူညီမည်နည်း။
မတ်လ 13, 2022 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ယူကရိန်း ငြိမ်းချမ်း ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Yurii Sheliazhenko နှင့် Global Campaign for Peace Education ၏ နှစ်ရှည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Werner Wintersteiner တို့သည် အကြောက်တရားနှင့် မုန်းတီးမှုကို ကျော်လွှားရန် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၏ အရေးပါမှုကို လင်းလက်တောက်ပစေပြီး အကြမ်းမဖက်သောဖြေရှင်းနည်းများကို လက်ခံယုံကြည်ကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှု(များ)။
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာပေးစာအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Democracy Now အောက်တွင် ပို့စ်တင်နေပါသည်။ Yurii Sheliazhenko (မတ်လ 1 ရက်၊ 2022) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း နှင့် Youtube ဗီဒီယို (မတ်လ 6၊ 2022) တွင် Yurii သည် စစ်အင်အားသုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းပြဿနာနှင့် စစ်တပ်များနှင့် နယ်နိမိတ်မရှိသော အနာဂတ်ကမ္ဘာတွင် အကြမ်းမဖက်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှု၏ ရှုထောင့်က မည်သို့ကူညီမည်ကို ဆန်းစစ်သည်။ ရုရှား-ယူကရိန်းနှင့် အရှေ့-အနောက် ပဋိပက္ခများသည် နျူကလီးယား ပျက်သုဉ်းမှုကို ခြိမ်းခြောက်မှု အရှိန်လျော့စေသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းသုံးမျိုး
ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မရှိပါက စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
(Werner Wintersteiner နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာပေးစာ၊ မတ်လ 12 ရက်၊ 2022)
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောသင့်တယ်။အကြမ်းမဖက်သောနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်း ၊ လက်ရှိအကျပ်အတည်းသည် အရပ်ရပ်တို့၌ အကျင့်မကောင်းသော ရာဇဝင်ရှိကုန်သော အရပ်ရပ်တို့၌ ယုတ်ညံ့သော အကျင့်ကို ကျင့်ကုန်သော နတ်သမီးတို့ အလိုရှိသည်အတိုင်း ပြုနိုင်ကုန်၏၊ နျူကလီးယား ပျက်ကွက်မှုကို မပါဝင်ဘဲ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသည် နှစ်ဖက်စလုံးကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ညှိနှိုင်းရန် ကူညီပေးသင့်သည်။ အမှန်တရားနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အရှေ့နှင့်အနောက် ညီညွတ်လိမ့်မည်။ အမှန်တရားသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ယင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်သော သဘောသဘာဝကြောင့် လူတို့ကို စုစည်းစေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသော ဘုံသဘောနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသော မုသာစကားတို့ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ဒုတိယနည်းကတော့ လုပ်သင့်တယ်။ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ၊ ဒုက္ခသည်များနှင့် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအပြင် စစ်မှုထမ်းရန် အသိစိတ်ရှိရှိ ကန့်ကွက်သူများကို ကူညီပေးပါ။ ကျား၊ မ၊ လူမျိုး၊ အသက်၊ အကာအကွယ် နယ်မြေအားလုံးတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ မြို့တွင်းစစ်မြေပြင်များမှ အရပ်သားအားလုံးကို ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် သေချာစေပါ။ ကုလအေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် ကြက်ခြေနီကဲ့သို့သော လူများကို ကူညီနေသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများသို့ လှူဒါန်းပါ သို့မဟုတ် မြေပြင်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ အလှူအတန်းငယ်များစွာရှိသည်၊ ၎င်းတို့ကို လူကြိုက်များသော ပလပ်ဖောင်းများတွင် အွန်လိုင်းတွင် ဒေသတွင်း လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့များတွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း အများစုမှာ သတိပြုပါ။ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေကို ကူညီတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စစ်ဆေးပြီး လက်နက်တွေ လှူတာ မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ သွေးထွက်သံယို တိုးမြင့်လာမှုကို သေချာအောင် လုပ်ပါ။
ပြည်သူများသည် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးမှုများ လိုအပ်ပြီး အကြောက်တရားနှင့် အမုန်းတရားများကို ကျော်လွှားကာ အကြမ်းမဖက်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို လက်ခံယုံကြည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တတိယအနေနဲ့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ပြည်သူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးဖို့ လိုတယ်။ အကြောက်တရားနှင့် မုန်းတီးမှုကို ကျော်လွှားပြီး အကြမ်းမဖက်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို လက်ခံယုံကြည်ရန် မျှော်လင့်ချက် လိုအပ်ပါသည်။ မဖွံ့ဖြိုးသေးသော ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှု၊ တီထွင်ဖန်တီးသူနိုင်ငံသားများနှင့် တာဝန်သိမဲဆန္ဒရှင်များထက် နာခံမှုရှိသော စစ်မှုထမ်းပညာရေးကို ထုတ်ပေးသည့် စစ်ပညာပေးခြင်းသည် ယူကရိန်း၊ ရုရှားနှင့် ဆိုဗီယက်ခေတ်လွန်နိုင်ငံအားလုံးတွင် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မရှိပါက စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ အမှန်တရားကို အစွမ်းကုန်ပြောပြီး ပစ်ခတ်မှုတွေ ရပ်ပြီး စကားပြောဖို့ တောင်းဆိုတာ၊ လိုအပ်သူတွေကို ကူညီပေးဖို့နဲ့ အကြမ်းမဖက်တဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပညာရေးမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ အတူ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တပ်များနှင့် နယ်နိမိတ်မရှိသောကမ္ဘာ။ အမှန်တရားနှင့် အချစ်သည် အရှေ့နှင့်အနောက်ကို ပွေ့ဖက်ထားသော ကြီးမားသော စွမ်းအားများဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ။
Yurii Sheliazhenko, Ph.D. (ဥပဒေ)၊, +380973179326၊ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး၊ ယူကရိန်း ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ အသိစိတ်ကန့်ကွက်မှုအတွက် ဥရောပဗျူရို (ဘရပ်ဆဲလ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ)၊ World BEYOND War (Charlottesville, VA, United States); ကထိကနှင့် သုတေသနအဖွဲ့၊ KROK တက္ကသိုလ် (Kyiv၊ ယူကရိန်း)၊ LL.M., B.Math, ဖျန်ဖြေရေးနှင့်ပဋိပက္ခစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာ
ပူတင်၊ Biden နှင့် Zelenskyy တို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို အလေးအနက်ထားကြသည်။
ရုရှ၏ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအောက်တွင် ကိယက်ဗ်မြို့တွင် ပြောကြားရာတွင် Yurii Sheliazhenko သည် တပ်များနှင့် နယ်နိမိတ်မရှိသော အနာဂတ်ကမ္ဘာတွင် အကြမ်းမဖက်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှု၏ ရှုထောင့်က ရုရှား-ယူကရိန်းနှင့် အရှေ့အနောက် ပဋိပက္ခများကို ခြိမ်းခြောက်နေသော အရှိန်လျော့သွားစေရန် မည်ကဲ့သို့ ကူညီပေးမည်ကို ရှင်းပြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သစ္စာရှိရှိ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုသင့်သည်- အနောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ၏ စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုဖြင့် ထူထောင်ထားသော နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်တွင် အမေရိကန်၏ခေါင်းဆောင်မှုကို သမ္မတ Biden က ထောက်ခံအားပေးကာ ယူကရိန်းကို ထောက်ခံကာ ယူကရိန်းအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် ရုရှားနှင့် ၎င်း၏ သစ္စာခံမှုကို ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။ အနောက်ဘက်သို့ ယူကရိန်း၏ ယူရို-အတ္တလန်တိတ် ရွေးချယ်မှု၊ ဒွန်ဘတ်စ်နှင့် ခရိုင်းမီးယားတို့အပေါ် ၎င်း၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ ရုရှားနှင့် ဆက်ဆံရေး ရပ်ဆိုင်းရေး၊ နယ်ချဲ့ဝါဒနှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် သမ္မတ Zelenskyy က ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။ သမ္မတပူတင်က ဆိုဗီယက်ခေတ်လွန်ဒေသတွင် ဘက်ပေါင်းစုံ ကွဲပြားမှုနှင့် ရုရှားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ထောက်ခံအားပေးကာ ယူကရိန်းအား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မဟာမိတ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေမရှိမှု၊ နျူကလီးယားလက်နက်များ ကင်းမဲ့မှု၊ ခရိုင်းမီးယားအပေါ် ရုရှား၏ အချုပ်အခြာအာဏာ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် Donetsk နှင့် Luhansk ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့ လွတ်လပ်ရေးတို့ အပါအဝင် ယူကရိန်းအား စစ်မဲ့စေရေးနှင့် ညစ်ညမ်းစေရေး တောင်းဆိုခြင်း၊ ယူကရိန်းရှိ ရုရှားလူမျိုးများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲ ရုရှားဆန့်ကျင်ရေး လက်ယာစွန်းများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ဤရာထူးများတွင် နက်နဲသော ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုများကို ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွား၊ တန်ဖိုးထားမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အခြေခံကျသော ညှိနှိုင်းမှုများတွင် ဖြေရှင်းသင့်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကူညီပေးဖို့၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်းနဲ့ တဝိုက်မှာ အကျပ်အတည်းတွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းဖို့ အဆိုပြုပါတယ်။
ကိယက်ဗ်ရှိ ယူကရိန်း ငြိမ်းချမ်းရေး သမား- မဆင်မခြင် စစ်ရေးပြမှုသည် ဤစစ်ပွဲသို့ ဦးတည်ခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ရမယ်။
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - အခု ဒီမိုကရေစီ။ မတ်လ 1 ရက် 2022 ခုနှစ်)
ဒါကအလုအယက်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Copy ကူးသည်၎င်း၏နောက်ဆုံး form မှာမည်မဟုတ်ပါ။
Amy လူကောင်း: ယူကရိန်းကို ရုရှားက ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာ ခြောက်ရက်မြောက်လာပြီဖြစ်ပြီး ရုရှားက ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကို အရှိန်မြှင့်လိုက်ပါတယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံ မြို့တော် ကိယက်ဗ်မြို့သို့ ဦးတည်သော ရုရှားသံချပ်ကာယာဉ်များ၊ တင့်ကားများနှင့် အမြောက်များဖြင့် မိုင် ၄၀ ရှည်လျားသည့် ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံများကို ပြသထားသည်။ ယနေ့အစောပိုင်းတွင် ရုရှားဒုံးကျည်တစ်စင်းသည် Kharkiv ရှိ အစိုးရအဆောက်အအုံတစ်ခုကို ထိမှန်ခဲ့ပြီး ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့၌ ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Kharkiv ရှိ အရပ်သား ဧရိယာများ ကိုလည်း ကျည် ကျရောက် ခဲ့သည်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း Okhtyrka မြို့တွင် ရုရှားစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုအား ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် ယူကရိန်းစစ်သား ၇၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ယူကရိန်းအာဏာပိုင်များက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားတို့သည် တနင်္လာနေ့တွင် ဘီလာရုစ်နယ်စပ်အနီးတွင် ငါးနာရီကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း သဘောတူညီမှု မရရှိခဲ့ပေ။ လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်း နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky က ယူကရိန်းအပေါ် လေယာဉ်မပျံသန်းရဇုန် သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တွေက ဒီအယူအဆကို ပယ်ချခဲ့ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ရုရှားသည် အရပ်သားများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့် သာမိုဘာရစ်ဗုံးများဖြင့် ပစ်မှတ်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ လေဟာနယ်ဗုံးလို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီဗုံးတွေဟာ စစ်ပွဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး နျူကလီးယားမဟုတ်တဲ့ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားသည် အရပ်သားများ သို့မဟုတ် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းကို ငြင်းဆိုထားသည်။ ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ယူကရိန်းမှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်တရားရုံးက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် အကျပ်အတည်းကို ဆွေးနွေးရန် တနင်္လာနေ့တွင် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ယူကရိန်းသံအမတ်ကြီး Sergiy Kyslytsya ဖြစ်သည်။
ဆာဂျီ KYSLYTSYA: ယူကရိန်း မရှင်သန်ရင် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှင်သန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယူကရိန်းမရှင်သန်ရင် ကုလသမဂ္ဂက ရှင်သန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထင်ယောင်ထင်မှားမရှိပါစေနှင့်။ ယူကရိန်း မရှင်သန်နိုင်ရင် နောက် ဒီမိုကရေစီ ကျရှုံးရင် အံ့သြလို့ မရပါဘူး။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ယူကရိန်းကို ကယ်တင်နိုင်သည်၊ ကုလသမဂ္ဂကို ကယ်တင်နိုင်သည်၊ ဒီမိုကရေစီကို ကယ်တင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည့် တန်ဖိုးများကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Amy လူကောင်း: ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အသံလွှင့်မထွက်ခင်လေးမှာပဲ ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky က ဥရောပပါလီမန်ကို ဗီဒီယိုနဲ့ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်တွင် လွှတ်တော်က မတ်တပ်ရပ် ဂုဏ်ပြုလွှာ ပေးခဲ့သည်။
Yurii Sheliazhenko နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ Kyiv ကို အခုသွားပါမယ်။ သူသည် ယူကရိန်း ငြိမ်းချမ်း ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး ဥရောပအသိစိတ်ကန့်ကွက်မှုဗျူရို၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ Yurii သည် World ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ Beyond စစ်နဲ့ သုတေသနမှာ တွဲဖက်တယ်။ KROK Kyiv ရှိ တက္ကသိုလ်။
Yurii Sheliazhenko၊ ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ အခုတော့ဒီမိုကရေစီ! ရုရှားကျူးကျော်မှု မတိုင်ခင်လေးမှာပဲ မင်းကို ငါတို့ စကားပြောခဲ့တယ်။ အခု မြေပြင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူအနေနဲ့ တောင်းဆိုနေတာတွေကို ပြောပြနိုင်မလား။
YURII SHELIAZHENKO: ကောင်းသောနေ့။ မျှတသော ဂျာနယ်လစ်ဇင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန္ဒပြပွဲများကို စစ်ပွဲ၏ ဝေဒနာနှင့် ကိလေသာများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖုံးအုပ်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အရှေ့နှင့်အနောက်ကြား စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာ ဝေးကွာလွန်းသဖြင့် မဆင်မခြင် စစ်ဆင်ရေးများ၊ နေတိုး ချဲ့ထွင်မှု၊ ယူကရိန်းကို ရုရှားကျူးကျော်မှု၊ ကမ္ဘာကို နျူကလီယား ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ယူကရိန်းကို စစ်အင်အား တိုးချဲ့မှု၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ ရုရှားကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ရုရှားသံတမန်တွေကို နှင်ထုတ်မှုတွေနဲ့အတူ ပူတင်ကို သံခင်းတမန်ခင်းကနေ သံတမန်ရေးရာကနေ စစ်ပွဲ အရှိန်မြှင့်ဖို့ တွန်းအားပေးနေပါတယ်။ ဒေါသကြောင့် လူသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးနှောင်ကြိုးကို ချိုးဖျက်မယ့်အစား၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးကြား ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နေရာတွေကို ထိန်းသိမ်းပြီး ခိုင်ခံ့အောင် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ အမြဲတမ်း လိုအပ်နေပြီး အဲဒီအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင် ယူကရိန်း၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ဖြစ်ပြီး ရုရှားအပေါ် နာကျင်စေသော စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ခြင်းသည် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းကြောင်း၊ ပဋိပက္ခအပေါ် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းသည် စစ်ပွဲကို အာရုံစိုက်ပြီး စစ်ပွဲကို အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုကို လျစ်လျူရှုထားသည်၊ ရဲရင့်သော ယူကရိန်း အရပ်သားများသည် လမ်းဆိုင်းဘုတ်များနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းများကို ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်၊ စစ်ပွဲရပ်ရန် တင့်ကားများကဲ့သို့ လက်နက်မပါဘဲ လမ်းများ နှင့် တင့်ကားများ ပိတ်ဆို့ခြင်း ၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Berdyansk မြို့နှင့် Kulykіvka ရွာတွင် လူများက ငြိမ်းချမ်းရေး ချီတက်ပွဲများကို စီစဉ်ပြီး ရုရှားစစ်တပ်ကို ထွက်သွားရန် စည်းရုံးခဲ့သည်။ မဆင်မခြင် စစ်ရေးပြုခြင်းသည် စစ်ပွဲဆီသို့ ဦးတည်သွားလိမ့်မည်ဟု နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုက သတိပေးခဲ့သည်။ ငါတို့မှန်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းသောအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး သို့မဟုတ် ရန်လိုမှုကို အကြမ်းမဖက်ခုခံရန် လူများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ထားသည်။ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို ကျနော်တို့ လိုက်နာတယ်။ ၎င်းသည် ယခုအကူအညီဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းတည်ရှိနေသည့် ငြိမ်းချမ်းသောအဖြေတစ်ခုအတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။
ယနေ့မှစ၍ ထာဝရ စစ်ပွဲများ ကင်းစင်ကြပါစေလို့ လူသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ သို့သော် ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လူအများစု၊ နေရာအများစုတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏လှပသော Kyiv မြို့တော်၊ ယူကရိန်းမြို့တော်နှင့် အခြားသော ယူကရိန်းမြို့များသည် ရုရှားတို့၏ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ၏ ပစ်မှတ်များဖြစ်သည်။ ဒီအင်တာဗျူးမစခင်မှာပဲ ပြတင်းပေါက်ကနေ ပေါက်ကွဲသံတွေ ထပ်ကြားရတယ်။ ဥသြသံများသည် နေ့စဥ် အကြိမ်များစွာ အော်ဟစ်ပြီး ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်သည်။ ရုရှား၏ ရန်စမှုကြောင့် ကလေးငယ်များ အပါအဝင် လူပေါင်း ရာနှင့်ချီ သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရတယ်။ ယူကရိန်းအစိုးရနှင့် Donbas တွင် ရုရှားကျောထောက်နောက်ခံပြု ခွဲထွက်ရေးသမားများကြား ရှစ်နှစ်ကြာ စစ်ပွဲအပြီးတွင် ရှစ်နှစ်ကြာ စစ်ပွဲအပြီး ရုရှားနှင့် ဥရောပရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ဥရောပရှိ ဒုက္ခသည်များအပြင် လူထောင်ပေါင်းများစွာသည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။
အသက် 18 နှစ်မှ 60 အတွင်း အမျိုးသားများအားလုံး ပြည်ပသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားပြီး စစ်မှုထမ်းရန် အသိစိတ်ရှိသူများကို ခြွင်းချက်မရှိ ကန့်ကွက်သူများနှင့် စစ်မှ ထွက်ပြေးလာသူများလည်း ခြွင်းချက်မရှိ ပါဝင်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။ War Resisters' International မှ အသက် 18 နှစ်မှ 60 အတွင်း အမျိုးသား နိုင်ငံသား အားလုံးကို နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခွင့် တားမြစ်ရန် ယူကရိန်း အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရုပ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ရုရှားတွင် ကြီးမားသော စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက်ပွဲများ၊ ပူတင်၏ စစ်ယန္တရားအား အကြမ်းမဖက် ဆန့်ကျင်သည့် ရဲရင့်သော ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံသားများအား ဖမ်းဆီး ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများ၊ ရုရှားရှိ အသိစိတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊ သိပ္ပံနည်းကျကန့်ကွက်မှုဆိုင်ရာ ဥရောပဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်များကလည်း ရုရှားစစ်တပ်၏ရန်လိုမှုကို ရှုတ်ချပြီး စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ရန် ရုရှားအား တောင်းဆိုကာ စစ်မှုထမ်းခြင်းအား ငြင်းဆိုရန် တပ်သားသစ်အားလုံးကို တောင်းဆိုကာ အစားထိုးအရပ်ဘက်ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားရန် သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ။
ယူကရိန်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထောက်ခံတဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ချီတက်ပွဲတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာလင်မှာ လူသန်းဝက်လောက်က စစ်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ပြင်သစ်၊ အီတလီမှာ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိတယ်။ အဏုမြူနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဗုံးများ ဆန့်ကျင်ရေး ဂျပန်ကောင်စီ Gensuikyo မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေများသည် ပူတင်၏ နျူကလီးယား ခြိမ်းခြောက်မှုကို ဟီရိုရှီးမားနှင့် နာဂါဆာကီတို့တွင် ဆန္ဒပြပွဲများဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် လတ်တလော နိုင်ငံတကာနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စစ်ဆန့်ကျင်ရေးပွဲများကို ရှာဖွေရန် သင့်အား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ WorldBeyondWar.orgယူကရိန်းစစ်ပွဲရပ်တန့်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနေ့တွင် “ရုရှားတပ်များ ထွက်သွား” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် မတ်လ (၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ မရှိ နေတိုး ချဲ့ထွင်ခြင်း၊” CodePink နှင့် အခြားငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များမှ စီစဉ်မှု။
ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းတို့သည် ယခုအချိန်အထိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး အရပ်သားများကို ဘေးကင်းလုံခြုံသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ စင်္ကြံများပေါ်တွင် သဘောတူညီရန်ပင် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းမှာ ရှက်စရာပင်။ ယူကရိန်းနဲ့ ရုရှားကြား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ပူတင်သည် ယူကရိန်း၏ ဘက်မလိုက်သော အနေအထား၊ ဖြိုခွင်းမှု၊ ယူကရိန်းစစ်ရေး ကင်းရှင်းရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော ခရိုင်းမီးယားကို ရုရှားပိုင်ကြောင်း အတည်ပြုချက် လိုအပ်သည်။ ပြီးတော့ သူက Macron ကို ပြောပြတယ်။ ဒါကြောင့် ပူတင်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ယူကရိန်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ရုရှားတပ်များ ယူကရိန်းမှ ထွက်ခွာရန်သာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ယူကရိန်း၏ ပိုင်နက်နယ်မြေ ခိုင်မာမှု ကိစ္စရပ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းသည် ခါကိဗ်နှင့် အခြားမြို့များကို ရုရှားက ဗုံးကြဲနေစဉ် Donetsk ကို ဆက်လက် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ပါတီနှစ်ရပ်လုံးဖြစ်တဲ့ ယူကရိန်းနဲ့ ရုရှားတို့က ဒေါသူပုန်ထပြီး တည်ငြိမ်ဖို့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ ပူတင်နှင့် Zelensky တို့သည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သီးသန့်ရပ်တည်မှုများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်မည့်အစား ဘုံပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို အခြေခံ၍ တာဝန်သိနိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် အလေးအနက်ထားပြီး သစ္စာရှိရှိ ဆွေးနွေးသင့်သည်။ ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် -
Juan ဂONZÁLEZ: ကောင်းပြီ၊ Yurii၊ Yurii Sheliazhenko၊ ငါမင်းကိုမေးချင်တယ် — မင်းသမ္မတ Zelensky ကိုပြောခဲ့တယ်။ အနောက်တိုင်း မီဒီယာ တော်တော်များများက သူ့ကို ကျူးကျော်ပြီးကတည်းက သူရဲကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ချီးကျူးခံနေရတယ်။ ဤအကျပ်အတည်းတွင် သမ္မတ Zelensky မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို သင်အကဲဖြတ်ခြင်းမှာ အဘယ်နည်း။
YURII SHELIAZHENKO: သမ္မတ Zelensky သည် စစ်ယန္တရားထံ လုံးဝလက်နက်ချခဲ့သည်။ သူသည် စစ်ရေးဖြေရှင်းချက်ကို လိုက်စားပြီး ပူတင်ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် ပျက်ကွက်ပြီး စစ်ပွဲကို ရပ်တန့်ရန် တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
နောက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးရဲ့ အကူအညီနဲ့ အမှန်တရားကို အာဏာလွှဲပေးဖို့၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့၊ စကားစပြောကြဖို့၊ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို အကူအညီပေးဖို့နဲ့ အကြမ်းမဖက်တဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပညာရေးမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့အတူ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လက်တွဲတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စစ်အင်အားနှင့် နယ်နိမိတ်မရှိသောကမ္ဘာ၊ အမှန်တရားနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကြီးမြတ်သောအင်အားကြီးဖြစ်ပြီး အရှေ့နှင့်အနောက်ကို ဖက်တွယ်ထားသည့်ကမ္ဘာ။ အကြမ်းမဖက်ခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တရားမျှတမှုအတွက် ပိုမိုထိရောက်ပြီး တိုးတက်သော လက်နက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
လူမှုရေးပြဿနာအားလုံးအတွက် အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သော panacea အဖြစ် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် စစ်ပွဲအကြောင်း မှိုင်းတိုက်မှုများသည် မှားယွင်းပါသည်။ ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားတို့အကြား ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အနောက်အုပ်စုနှင့် အရှေ့နိုင်ငံများက အပြန်အလှန် ချမှတ်ထားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် အမေရိကန်နှင့် ရုရှားတို့ကြားတွင် အားနည်းသွားနိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်၊ အလုပ်သမား၊ ကုန်စည်နှင့် ငွေကြေးဈေးကွက်ကို ခွဲထုတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သည် ကမ္ဘာ့အစိုးရအတွက် ၎င်း၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် နည်းလမ်းကို မလွဲမသွေ ရှာတွေ့မည်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းက- အနာဂတ်ကမ္ဘာ့အစိုးရသည် မည်မျှယဉ်ကျေးပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းကျလာမည်နည်း။
အကြွင်းမဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်ကိုင်ပြုရန် စစ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒီမိုကရေစီထက် မုန်းတီးရေးဝါဒကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ နေတိုး အဖွဲ့ဝင်များသည် ယူကရိန်းအစိုးရ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထောက်ပံ့ရန် စစ်ရေးအကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးသည် သို့မဟုတ် ရုရှားက Donetsk နှင့် Luhansk ခွဲထွက်ရေးသမားများ၏ ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အခြာအာဏာကို တိုက်ပွဲဝင်ရန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စေလွှတ်သည့်အခါ၊ စစ်မထားသော အချုပ်အခြာအာဏာသည် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်စေသည်ဟု မှတ်သားထားသင့်ပြီး အချုပ်အခြာအာဏာသည် - အချုပ်အခြာအာဏာသည် ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးမဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအားလုံးသည် သွေးဆာနေသော အချုပ်အခြာအာဏာကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် တစ်ဦးချင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အနောက်နိုင်ငံများ၏ စစ်အမြတ်ထုတ်သူများသည် အရှေ့တိုင်း၏အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်သူများကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေကို ခွဲဝေအုပ်ချုပ်ရန် ၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများသည် အခြေခံအားဖြင့် အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ နေတိုး ယူကရိန်းအစိုးရရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ စစ်ပွဲအတွက် အထောက်အပံ့နဲ့ ယူကရိန်းအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး မျှော်မှန်းချက်တွေကြောင့် အရှိန်မြင့်လာတဲ့ ယူကရိန်းတဝှမ်း ပဋိပက္ခကနေ ဆုတ်ခွာသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ နေတိုး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမဟာမိတ်များအစား လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး မဟာမိတ်အဖြစ် ဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းသင့်သည်။ ပြီးတော့--
Amy လူကောင်း: Yuri တစ်ခုခုမေးပါရစေ။ ဒီစကားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ အခုပဲရထားတယ်။ Zelensky က ဥရောပပါလီမန်ကို ဗီဒီယိုနဲ့ မိန့်ခွန်းပြောဖူးတယ်။ ထို့နောက်တွင် ၎င်းတို့က သူ့ကို မတ်တပ်ရပ် ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားခဲ့ကြပြီး ဥရောပပါလီမန်က ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ယူကရိန်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းကို အတည်ပြုလိုက်ပါသည်။ အဲဒါကို မင်းဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲ။
YURII SHELIAZHENKO: ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် ဥရောပ သမဂ္ဂ နဲ့ ပေါင်းစည်း ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ အတွက် ဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။ ပြီးတော့ အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီး အားလုံး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သို့သော် ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ယူကရိန်းတို့မှာလည်း အလားတူ စစ်ရေးပြဿနာတစ်ခုရှိသည်။ အော်ဝဲလ်၏ဝတ္ထုတွင် dystopian ငြိမ်းချမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တူသည်။ 1984ယူကရိန်းကို ဥရောပ ငြိမ်းချမ်းရေး အဆောက်အအုံက စစ်ရေးအကူအညီ ပေးတဲ့အခါ၊ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အကျပ်အတည်းကို အကြမ်းမဖက်ဘဲ ဖြေရှင်းချက်နဲ့ စစ်မဲ့ရေး လုပ်ဖို့ အကူအညီတွေ လွဲချော်လုနီးပါး ဖြစ်နေပါတယ်။ ယူကရိန်းက ဥရောပပိုင်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယူကရိန်းသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂမှာ ယူကရိန်းနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ လျှောက်လွှာတင်တာ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အနောက်ရဲ့ စုစည်းမှုဟာ အရှေ့ကို ရန်သူလို့ ခေါ်တဲ့ ရန်သူကို ပေါင်းစည်းဖို့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အရှေ့နှင့်အနောက်တို့သည် ငြိမ်းချမ်းသော ရင်ကြားစေ့ရေးကို ရှာဖွေသင့်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်တပ်နှင့် နယ်နိမိတ်မရှိသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို လိုက်နာသင့်သည်။ အနောက်နိုင်ငံတွေ စုစည်းမှုဟာ အရှေ့ကို စစ်မတိုက်သင့်ပါဘူး။ အရှေ့နှင့်အနောက်တို့သည် မိတ်ဆွေဖြစ်သင့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ စစ်မဲ့နယ်မြေအဖြစ် နေထိုင်သင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ နူကလီးယားလက်နက်တားမြစ်ရေးသဘောတူစာချုပ်သည် အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသည့် စုစုပေါင်းစစ်မဲ့ဖျက်သိမ်းရေးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သိပါတယ်၊ အခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတွေရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို အခြေခံတဲ့ ရှေးရိုးဆန်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ပြဿနာတစ်ခု ရှိနေတယ်။ ဥပမာ- ယူကရိန်းနိုင်ငံသားအများအပြားသည် အများသူငှာ ရုရှားစကားပြောဆိုခြင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ကို ယူကရိန်းက တားမြစ်သောအခါတွင်၊ သာမန်ဖြစ်ပုံရသည်။ အချုပ်အခြာအာဏာရှိပုံရသည်။ မဟုတ်ဘူး၊ဟုတ်ပါတယ်။ ပူတင်ပြောသည့်အတိုင်း ကျူးကျော်ရန် နှင့် စစ်ရေးအရ ရန်လိုခြင်းအတွက် မျှမျှတတ အကြောင်းပြချက်မဟုတ်သော်လည်း မမှန်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေက လူ့အခွင့်အရေးဟာ အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ ယူကရိန်းကို အကြိမ်များစွာ ပြောသင့်ပါတယ်၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး၊ ကိစ္စ၊ ရုရှလိုလားသူတွေရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှု၊ နိုင်ငံရေးဘဝတွေမှာ ရုရှားစကားပြောသူတွေအပါအဝင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ အရေးကြီးသောအရာ။ ယူကရိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ လူစုလူဝေးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖိနှိပ်ခြင်းသည် ကရင်မလင်ကို ဒေါသထွက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ အမှန်ပင် ဤအကျပ်အတည်းကို အရှိန်မြှင့်သင့်သည်၊ အရှိန်မမြှင့်သင့်ပါ။ ယူကရိန်းကို ဥရောပနိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာဟာ ဥရောပနဲ့ ရုရှားကြား အတိုက်အခံ၊ စစ်ရေး အတိုက်အခံတွေအတွက် ရှေ့မတိုးသင့်တဲ့ နေ့ကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရုရှားကလည်း ယူကရိန်းကနေ သူတို့ရဲ့ စစ်အင်အားနဲ့ ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ရှန်ဟိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ တခြား ဒေသတွင်း မဟာမိတ်တွေ၊ အာဖရိကသမဂ္ဂ အစရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ညီညွတ်သောကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအင်အားစု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဧမာနွေလ Kant သည် သူ၏လှပသောလက်ကမ်းစာစောင်တွင်၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်မှန်းထားတာ မင်းသိလား။ ဧမာနွေလ Kant ၏ အစီအစဉ်
Juan ဂONZÁLEZ: ကောင်းပြီ၊ Yurii၊ Yurii Sheliazhenko၊ ငါမင်းကိုမေးချင်တယ် — အခြေအနေတွေ ပြင်းထန်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူကရိန်းက ယူကရိန်းရဲ့ အချို့နေရာတွေမှာ လေယာဉ်မပျံသန်းရဇုန်ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။ အဲဒါကို ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ စစ်တပ်တွေက ကျင့်သုံးရမှာ သေချာပါတယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ် မပျံသန်းရဇုန် သတ်မှတ်ရေး တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
YURII SHELIAZHENKO: ကောင်းပြီ၊ ဒါဟာ အရှိန်မြှင့်ဖို့၊ အနောက်နိုင်ငံတခုလုံးနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့၊ စစ်ရေးရှုထောင့်က စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရုရှားကို ဆန့်ကျင်ဖို့၊ ပူတင်က ဒါကို နျူကလီယား ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ တုံ့ပြန်ထားပြီးသားဆိုတော့ သူ ဒေါသထွက်နေမှာ သေချာပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူလည်း ကြောက်သလို Kyiv မှာ ဒီနေ့လည်း ကျနော်တို့ ကြောက်နေပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်း အခြေအနေကို ကြောက်နေတယ်။
အခု ငါတို့ အေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ တွေးသင့်တယ်။ အမှန်တကယ် စည်းလုံးသင့်သော်လည်း ပဋိပက္ခများ ပြင်းထန်စေရန်နှင့် စစ်ရေးအရ တုံ့ပြန်ရန် မညီညွတ်သင့်ပါ။ ပဋိပက္ခကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြေ၊ ပူတင်နဲ့ Zelensky တို့ကြား ညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းသမ္မတတွေ၊ Biden နဲ့ Putin၊ အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားကြား ညှိနှိုင်းမှုတွေကို လိုက်လျှောက်သင့်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အနာဂတ် ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသည် သော့ချက်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ပြည်သူများသည် အနာဂတ်တွင် မျှော်လင့်ချက်များ ဆုံးရှုံးသွားသောအခါတွင် စစ်ပွဲစတင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်တွင် ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် မျှော်လင့်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုတွေ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှေးရိုးဆန်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတယ်။ ထို့အပြင်၊ လူအများစုသည် ကောင်းကင်တမန်များ သို့မဟုတ် နတ်ဆိုးများဖြစ်ရန် မကြိုးစားကြသည်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ယဉ်ကျေးမှုတို့ကြားတွင် လွင့်မျောနေကြသည်။
Amy လူကောင်း: Yurii ငါတို့မသွားခင်မှာ မင်းကိုမေးချင်တယ်၊ မင်း Kyiv မှာရှိလို့ စစ်ယာဉ်တန်းက Kyiv ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ ရှိတယ်- ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတော်တော်များများက ထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသလိုပဲ၊ ထွက်ခွာဖို့ စီစဉ်နေသလား၊ ပိုလန်၊ ရိုမေးနီးယားနှင့် အခြားနေရာများသို့ နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော် ယူကရိန်းနိုင်ငံသား တစ်သန်းခွဲရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် မင်းဆက်နေမှာလား။
YURII SHELIAZHENKO: ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အရပ်သားတွေကို စွန့်ခွာဖို့ ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းတို့ သဘောတူထားတဲ့ လုံခြုံတဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစင်္ကြံတွေ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ညှိနှိုင်းမှုမှာ ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ အမျိုးသားတွေအားလုံး စစ်မှုထမ်းဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ ပါဝင်သင့်တယ်လို့ ယူဆပြီး စစ်မှုထမ်းဖို့ အသိစိတ်ရှိရှိ ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့် လူ့အခွင့်ရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေ ထွက်ပြေးဖို့ နည်းလမ်းမရှိပါဘူး၊ ပြီးတော့ ဒီမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယူကရိန်းနဲ့အတူ ငါရှိနေတယ်၊ ​​ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ယူကရိန်းကို ဒီသဘောကွဲလွဲတဲ့ စစ်အင်အားသုံး ကမ္ဘာက ဖျက်ဆီးပစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Amy လူကောင်း: Yurii Sheliazhenko၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အသက် 18 နဲ့ 60 နှစ်ကြား အမျိုးသားတွေကို ယူကရိန်းကနေ ထွက်ခွာခွင့်မပြုပါဘူး။ Yurii သည် ယူကရိန်းနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်း ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှုးဖြစ်ပြီး ဥရောပ သိပ္ပံနည်းကျ ကန့်ကွက်မှုဆိုင်ရာ ဗျူရို၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ကမ္ဘာ့ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်သည်။ Beyond စစ်နှင့် သုတေသန တွဲဘက် မှာ ရှိသည်။ KROK Kyiv၊ ယူကရိန်းရှိတက္ကသိုလ်။
တက်လာတော့ ယူကရိန်းမှာ အကျပ်အတည်းရဲ့ အရင်းမြစ်တွေကို ကြည့်တယ်။ Andrew Cockburn ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ပါမည်။ Harper ကိုရဲ့ မဂ္ဂဇင်းနှင့် ယေးလ်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ Timothy Snyder။ ငါတို့နှင့်အတူနေပါ။
Amy လူကောင်း: Harry Belafonte "မှတ်မိအောင်ကြိုးစားပါ။ သူ ဒီနေ့ အသက် ၉၅ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ Harry! ငါတို့ကြည့်ချင်ရင် အင်တာဗျူး Harry Belafonte နဲ့ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ သင်ဟာ democracynow.org ကို သွားနိုင်ပါတယ်။
ဤအစီအစဉ်၏မူလအကြောင်းအရာတစ်ခုအောက်မှာလိုင်စင်ရဖြစ်ပါတယ် ကို Creative Commons Attribution-ရယူထားရတာ-အဘယ်သူမျှမလက်ရာများ 3.0 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုင်စင်။ democracynow.org ဤအလုပ်၏ဥပဒေရေးရာမိတ္တူ attribute ပေးပါ။ ဒီ program ထည့်သွင်းသောအလုပ် (များ) ၏အခြို့သော, သို့သော်, သီးခြားစီလိုင်စင်ရနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ခွင့်ပြုချက်အဘို့, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
စစ်ပွဲ- HerStory – အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့အတွက် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ
ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို ကိုင်တွယ်ရန် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေး အယူအဆ (Berghof Foundation)
မြို့ပြခုခံမှုအပေါ်စာသင်ခန်းအခြေပြုနှင့်အွန်လိုင်းသင်ကြားခြင်းအတွက် ICNC သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
ဇန်နဝါရီလ 22, 2016 ရန်ပုံငွေအခွင့်အလမ်းများ 0
အကြမ်းမဖက်သောပflိပက္ခများဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာ (ICNC) သည်လူကြိုက်များသည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Fellowship အစီအစဉ်၏တတိယအကြိမ်ကိုစာသင်ခန်းအခြေပြုနှင့်အရပ်ဘက်ခုခံမှုအပေါ်အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းစတင်သည့်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပညာသင်ဆုရှစ်ခုအထိကိုဒေါ်လာ ၁,၃၀၀ ဒေါ်လာဖြင့်လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ်ဒြေနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအခြေအနေများတွင်ရှိပြီးသားစာသင်ခန်းထဲ၌ပါ ၀ င်မည့်မြို့ပြခုခံမှုဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းယူနစ်တစ်ခုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ - လျှောက်ထားသူ၏အိမ်တက္ကသိုလ်တွင်ရွေးချယ်ထားသည့် (သို့) မဖြစ်မနေစာသင်ရမည့်သင်တန်း (သို့) လျှောက်ထားသူများ၏တက္ကသိုလ်၊ မြို့၊ ခရိုင်၊ တိုင်းနှင့်ဒေသမှကျောင်းသားများနှင့်စိတ် ၀ င်စားသောသင်တန်းသားများကိုလူထုဆန့်ကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအွန်လိုင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
“ Organizing 101” - စစ်ပွဲပြီးလျှင် World War မှအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းပေးခြင်း!
နိုဝင်ဘာလ 3, 2020 ပွဲများနှင့်ညီလာခံများ, သတင်းနှင့်အထူးများ 0
World BEYOND စစ်ပွဲ၏အခမဲ့ (၄) ပတ် (၂၀ နာရီ) အွန်လိုင်းသင်တန်း“ Organizing4Training” သည်ရပ်ရွာလူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများအားသြဇာသက်ရောက်ရန်အတွက်ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုဖော်ပြသည်။ ပါ ၀ င်သူများသည်ရိုးရာနှင့်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာကြမည်ဖြစ်ပြီး“ fusion” စည်းရုံးရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်သောလူထုအခြေပြုမှုရှုထောင့်မှလှုပ်ရှားမှုတည်ဆောက်ခြင်းကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
“ ဖြေရှင်းချက်တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာပညာရေး” - Metta Center Podcast
အောက်တိုဘာလ 5, 2015 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
(မူရင်းဆောင်းပါး - အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက် Metta စင်တာ)“ ပညာရေးဟာတခြားစနစ်အားလုံးရဲ့အခြေခံရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောပြင်းထန်သောဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောပြproblemsနာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည် [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]